Faka izinombolo zamakhasi ku-LibreOffice | Kusuka kuLinux
Uma kukhona okuthile engingakwazi ukukuma, kusebenza nezinhlelo ze-Office. Kepha ngeshwa, kufanele nginakekele abasebenzisi abajwayela inqubo yokufuduka, nakwabanye ushintsho lwe Ihhovisi le-MS a LibreOffice kunzima ngandlela thile.
Omunye wemisebenzi ejwayelekile kakhulu abasebenzisi abangibuza yona nsuku zonke: Ngiyifaka kanjani inombolo yekhasi, kepha inombolo yokuqala iqala ekhasini engilifunayo?
Futhi akuyona into engaphansi ukuthi bayazibuza ukuthi bangayenza kanjani into enjengale, ngoba ukulunga, inqubo ayicaci kangako. Ake sibone ukuthi sikwenze kanjani.
1 Iqala ukufaka izinombolo ekhasini lesibili
2 Iqala ukufaka izinombolo kwelinye ikhasi
Iqala ukufaka izinombolo ekhasini lesibili
Ake sithi sinekhasi lokuqala le- Ikhava (sencwadi leyo ngelinye ilanga kuyodingeka siyibhale futhi siyishicilele ngaphambi kokuba sife) futhi sifuna ikhasi #1 kube okulandelayo, okungukuthi, ikhasi 2.
Siya ekhasini lokuqala, bese ucindezela ukhiye F11 ukwethula Isitayela Nesakhiwo Sokuhlela. Kamuva siya Isitayela samakhasi futhi senza isiqiniseko sokuthi ohlwini lokudonsela ezansi bamakiwe bonke izitayela.
Manje, ukuba nesikhombisi ekhasini lokuqala ledokhumenti (okuzoba ikhava yethu), kumhleli we Isitayela nefomethi sichofoza kabili Ikhasi lokuqala.
Kufanele sibe nokuthile okufana nalokhu kuMhleli Isitayela nefomethi:
Manje kufanele nje siye kumenyu engenhla bese uchofoza Faka »I-Manual Jump, sikhetha Ukuhlukana kwekhasi con Isitayela esizenzakalelayo kanye nenketho Shintsha inombolo yekhasi kumakiwe.
LibreOffice izokwenzela elinye ikhasi elingenalutho kithi. Manje ake Faka »Unyaweni» Isitayela Esizenzakalelayo. Isikhombisi sizoya phansi ngezansi kwekhasi futhi lapho likhona, ekugcineni sizoya Faka »Izinkambu» Izinombolo Zamakhasi. Yilokho kuphela.
Kulungile, kuhle kakhulu kepha kuthiwani uma sifuna ukufaka inombolo yekhasi lokuqala ekhasini lesi-4, lesi-5 noma lesi-10?
Iqala ukufaka izinombolo kwelinye ikhasi
Ngaphambi kokungena kule ngxenye kuhle ukukucacisa lokho LibreOffice kucatshangelwa ukuthi ngabe lelo khasi Kwesobunxele o Kwesokudla, njengasencwadini. Uma sibheka izinombolo ezilinganayo ziya ekhasini "kwesobunxele" kanye nezinombolo ezingajwayelekile ekhasini "kwesokudla".
Empeleni kule ngxenye ngenze izivivinyo ngisebenzisa okufanayo Ikhasi lesobunxele que Ikhasi langakwesokudla ku Isitayela Nesakhiwo Sokuhlela. Ngamanye amagama, siphinda inqubo efanayo yangaphambilini.
Umehluko ukuthi kufanele sizibeke ekhasini ngaphambi kwaleyo esifuna ukuba nenombolo 1, futhi esikhundleni sokukhetha ku Isitayela Nesakhiwo Sokuhlela inketho Ikhasi lokuqala, siyakhetha Ikhasi langakwesokudla o Kwesobunxele, kuya ngenani abalifaka kudatha ye- I-Manual Jump.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka izinombolo zamakhasi ku-LibreOffice
NguNkulunkulu, ngingomunye wabasekeli be-software yamahhala kanye nalabo abagqugquzela ukuthuthuka nokusetshenziswa kwayo, kepha ngokusobala sikude kakhulu nokuba ne-Office Suite ehlangabezana nalokho okulindelwe abasebenzisi.
Uma nje izinto ziqhubeka ngiyaqhubeka nokulingisa ihhovisi ngewayini.
Sawubona Yoandry futhi wamukelekile:
Kuyiqiniso ukuthi ngithe umsebenzi unzima, kepha akudingeki ukuthi ubhukude unqamule i-Amazon. 😉
Futhi lapho abantu bencane abayisebenzisayo, ukukhula kwabo kuzoba nzima kakhulu, ngakho-ke ngokudabukisayo lokho okushoyo kuyaphazamisa
Okudingekayo akusibo abantu bokuyisebenzisa, kepha inkampani ethile ngasikhathi sinye, ifaka ama-dollar ayizinkulungwane ezingama-50/100, futhi inikeze impilo ku-suite xD.
Iqiniso. Kuyiqiniso futhi ukuthi abantu abaningi bayayisebenzisa, kepha ngokusobala akekho noyedwa okhathaze imininingwane efana nalena, ayikabikwa futhi yingakho, kungenzeka, lezi zinyathelo zingashintshiwe noma zenziwe lula.
@Yoandry angiboni ukuthi kunzima kangakanani, futhi, ku-Windows akukude kangako ukuhamba, ngoba ukwenza lezi zinto kufanele unikeze ifomethi efanelekile kudokhumenti ukuze ukubala okuzenzakalelayo kwenziwe kahle, futhi ngikholwe ukuthi baningi Abantu engibaziyo abenza lokho kubanikeza ikhanda.
empeleni emawindini udala kuphela ikhefu lesigaba, bese ufaka izinombolo futhi lapho ithi qala khona: ubeka u-1.
Akuyona enembile nhlobo kepha ngeshwa kulula.
http://office.microsoft.com/es-es/word-help/el-numero-de-paginas-de-forma-diferente-en-distintas-secciones-HA101832542.aspx i-office.microsoft.com isusa impikiswano yakho… ..lokhu akulula e-MS Office
Angikuboni kunzima, okwenzekayo ukuthi yize kubukeka kufana nathi, uMlobi uyi-processor yamagama ngenkathi i-MS Word iyi-processor yamagama, ebenza babe yizinhlelo zezinhloso ezahlukahlukene. Futhi kungabonakala njengemisebenzi elula eyokuqala inzima kakhulu, kepha izitayela ziyithuluzi elinamandla kakhulu (futhi kwiMS Word azisebenzi kahle) uma kukhulunywa ngokwenza imibhalo eyinkimbinkimbi kakhulu njengezincwadi zethisisi.
Kepha ungangikholwa, kunombhalo omuhle kakhulu kuMlobi obizwa ngokuthi yi-Mastering the Writer lapho zonke lezi zinhlobo zezinkinga zivezwa khona futhi zinekhwalithi emangalisayo ebhalwe yi-RGB-es, eyaziwa kahle kwizithangami zosizo ze-AOO / LO nokuyiyona futhi ingxenye yephrojekthi ye-Apache OO.
Ukulingisa ihhovisi ngewayini ... ngenxa yekhasi elifakwa izinombolo? Woza ...
Angazi ukuthi kungani usho njalo, akukho lutho olushubile ukudlula izinombolo zamagama nekhasi. I-LO ayinginikanga nkinga ngaphezu kokuhlehla okuthile, futhi ngiyisebenzisa emsebenzini, empeleni anginayo i-Window $ ku-pc yami yomsebenzi (noma kunoma iyiphi, lol).
incazelo inzima hhayi inqubo. Into ebalulekile akuyona inqubo uqobo kodwa umqondo. Ngokuqondene nenqubo kuyo yomibili i-MS Office ne-LOffice, idinga izinyathelo ezimbalwa kepha akusikho okufanele kufundwe kepha umqondo.
Ku-LOffice ikhasi elingenayo inombolo yekhasi 'i-Page isitayela X' elinye ikhasi elinezinombolo zekhasi i-'Sitayela sekhasi Y '... Ungaqala kabusha izinombolo njengoba futhi noma nini lapho ufuna noma ulisusa noma kuphi embhalweni, kuphela uma kungenjalo Uyalifuna, ulinikeza ikhasi njengesitayela u-'X ', uma ulifuna, noma ngabe uliqala phansi noma uyaqhubeka nalo, ulinika isitayela sekhasi elithi' Y '.. kubonakala kimi ukuthi ngizobhala okuthile ukusho kangcono… ..
Lokho kusho, indlela yokuphatha lo mbuzo ku-LOffice ibonakala inembile kakhulu: I-LOffice iphatha Izitayela Zekhasi, into entula i-MSOffice. I-MSOffice ikwenza nge 'Izigaba', kepha ayanele ku-LOffice esinayo 'Isitayela Sekhasi' ngaphezu 'Kwezigaba' ezijabulayo
Ngihlala eMs Office ngakho-ke ngigwema ukuphathwa yikhanda.
Ake sibone, ichaza emigqeni emi-3 ukuthi yini inqubo encishisiwe e-MS Office evikela ikhanda lekhanda lesihloko sendatshana
Ungakhathazeki ngakho indiolinux. Uma iHayidesi lithi i-MS Office ingcono noma kulula kuye, izizathu zakhe ziyoba njalo. Masingaqali impikiswano ye-MS Office vs LibreOffice.
Ngiyazi kahle ukuthi lolu hlobo lwamazwana lungacasula kanjani, ama-indiolinux, ayinyumba ngokuphelele futhi ayisiwula, kepha wonke umuntu ukhululekile ukuzikhethela futhi asho akufunayo, noma ngabe ubuwula be ... Zama ukucela umuntu ukuthi akuchazele okuthile, kumane kuzwela nje.
I-xD ingukuthanda kwami, angidingi ukuchaza ukuthi kungani ihhovisi le-MS liphakeme kune-LO / AOO.
U-Elav, ikhwalithi yebhulogi kufanele ivikelwe kuze kube sekufeni, noma yikuphi ukuphawula okwehlisayo nokuhlambalazayo kufanele kususwe ngokushesha. Abantu bagxila futhi baxoxisane kakhulu ngalolu hlobo "lwamazwana" olulahlekile okuqukethwe kwendatshana eshicilelwe uqobo, okuvamise ukuba yikhwalithi engenakuqhathaniswa.
Siyabonga ngencazelo, kepha kuyihlazo iLibreOffice ayinakho ukuhambisana okuhle ne-MS Office.
Ngikwenze njengoba kunjalo ... eminweni njengoba uchaza ku-athikili futhi ... nefayela ebengisebenza kulo ngenkathi ngilibuyisa lizovulelwa ku-MS Word bekuyilo elami **** !!!
Izinombolo zamakhasi zaziphindwe kabili ubukhulu bezinjalo, ezinye izithombe ayenazo kwikhava wazisusa ... kahle ... njengoba nje ngifuna ukuzivumelanisa neLibreOffice futhi ngisebenze ngayo, abantu basasebenzisa i-MS Office futhi abakwazi ukuhlelwa kusuka ngaleyo ndlela kuzo zombili lezi zinhlelo, okungangisola kakhulu emshinini obonakalayo ngizofaka iWindows yokubeka i-MS Office futhi ngisebenze kuyo, kuze kube yilapho kusebenza "umshado" phakathi kwalezi zindawo ezimbili zasehhovisi.
Umbuzo, ngabe kukhona owaziyo ukubeka isibonelo izinombolo ngesiRoma zisho engxenyeni yokuqala bese i-Arabhu iqala ngeyodwa njengoba kufundisa okushoyo.
Lapho inombolo yekhasi isifakiwe ungachofoza kabili kuyo bese ukhetha ukuthi iyiphi ifomethi (yamaRoma, yesi-Arabhu, njll.) Oyifunayo.
Manje ukuze ube nezingxenye ezimbili zombhalo eyodwa enezinombolo zamaRoma (isb. Inkomba) nenye enezinombolo zesi-Arabhu (isb. Umzimba wombhalo) kufanele usebenzise izitayela zamakhasi ama-2, ngokwendlela yami yokuphatha i-LO:
Ngiphakamisa lo msebenzi:
Dala idokhumenti entsha, cindezela u-F11, unikeze isithonjana sesine esithi 'Izitayela Zekhasi' chofoza kwesokudla, khetha okuthi 'Okusha' egameni faka 'iRoma' bese wamukela.
Qhafaza kwesokudla futhi, khetha 'Okusha' egameni faka 'i-Arabhu' bese wamukela.
Unedokhumenti eli-1 elinelishidi elilodwa elingenalutho elinezitayela zamakhasi amabili ezakhiwe wedwa.
Ewindini 'Lezitayela Zamakhasi', chofoza kabili ku-'Roma '(ukwabela noma yisiphi isitayela sekhasi eshidini, mane uchofoze kabili kwisitayela ngenkathi useshidini olifunayo
Manje faka ikhefu lekhasi (njengoba indima yendatshana # 8 isho) kepha ngesitayela esikhundleni sokuthi 'okuzenzakalelayo' ukhethe 'i-arabic'.
Manje usunodokhumenti owodwa onamashidi ama-1, isitayela sokuqala 'samaRoma', isitayela sesibili 'sesi-Arabhu'.
Awukayifaki ngisho inombolo yekhasi kepha akunandaba, usuvele ulungele idokhumenti yakho ... hhayi lokho kuphela kepha nokuningi kakhulu:
Iya kushidi 1, faka - inombolo yekhasi lenkambu. Qhafaza kabili kuleyo nombolo ekhasini ledokhumenti bese ukhetha isitayela samaRoma.
Iya kushidi 2, faka - inombolo yekhasi lenkambu Qhafaza kabili kuso bese ukhetha isitayela sesi-Arabhu.
Ukubhala lokhu kungithathe amahlandla ayi-10 okudingekayo ukukusebenzisa ... ungadangali, kulula
Hawu, isibonelo sakho besikhombisa, sisebenza kahle, futhi ukwenza kanjalo kunengqondo impela, ngiyabonga ngempendulo yakho.
Ngibe nale nkinga lapho, embhalweni wamakhasi amaningi asevele ebhaliwe, nginqume ukubeka izinombolo. Benginekhava kumbhalo ofanayo, ngakho-ke bengifuna ukuthi ikhasi lesibili libe yinombolo 1.
1. Ngiqale ngenza okushiwo kokuthunyelwe. Ngesikhombisi ekhasini lokuqala (ikhava) kuvulwa i- "Styles and format editor", bese kukhethwa "izitayela zekhasi" bese lapho kukhethwa khona "Ikhasi lokuqala"). Ngalokhu, inombolo engezansi ayisabonakali kwikhava. Kepha, kowesibili kwavela inombolo 2 futhi ngangifuna ukuthi lokhu kube ngu "1".
2. Kulokhu, enombolweni yekhasi lesibili, kuvulwa imenyu ye- "edit field" (isikhombisi sibekwe phambi kwenombolo yekhasi bese sichofozwa kabili). Khetha u- "Arabhu" naku- "correction" (lapho kuvela u-0) bhala "-1".
Ngaleyo ndlela ikhasi lesibili livela njengenombolo 1. Uma inani "lokulungisa" lingu-2 ngokwesibonelo, inombolo engu-1 izovela ekhasini lesithathu njalonjalo.
Yize isinyathelo sesibili singangeqa esokuqala, kunokubi ukuthi isikhala senombolo esekhasini lokuqala sihlala.
Lokhu ngikwenze eLibre Office 3.6 nase-Open Office 4.0 futhi kwasebenza kuzo zombili. Ngiyethemba iyakusebenzela. Ozithobayo.
Ngikwenze ngekhefu lekhasi, kwaba lula kimi ukukwenza. engingakakutholi okwamanje ukushintsha idatha ngaphandle kwezinombolo. Ngiyachaza
Ngomsebenzi uvame ukuhola, ikhava, inkomba, isingeniso njll njll njll kuze kube sekufikeni emzimbeni womsebenzi. Engikubheke ngeze ukwenza yonke into ngaphandle komzimba womsebenzi ihambe ngezinombolo zamaRoma futhi ukuze inkomba ezenzakalelayo ibazwisise ... Ngiyazi ukuthi kwenye indawo ngizoyithola impendulo
Ukuze amakhasi athile avele ngezinombolo ezahlukahlukene (ngokwesibonelo samaRoma), mane ubeke isikhombisi ekhasini elizolungiswa, bese kuvulwa imenyu yefomethi, kukhetho "lekhasi" esiya kuthebhu "yekhasi" naku- Isigaba "sezilungiselelo zokuklama", ebhokisini "Fomathi", sikhetha esifanelana nathi (isibonelo samaRoma).
Uma lokhu sekwenziwe, lapho ufaka inombolo yekhasi, izovela ngokuzenzekelayo ngefomethi ekhethiwe. Into enhle ngale ndlela ukuthi, uma sifaka inkomba, ifomethi ezovela kuyo kuzoba yiyo ekhethiwe futhi asikho isidingo sokwenza ukulungiswa mathupha.
Siyabonga ngolwazi !!! ILibreOffice ibukeka njengehhovisi elihle kimi, futhi lamaqhinga nemininingwane iyasiza kakhulu, ikakhulukazi emsebenzini wesikole 🙂
Angikwazi ukukwenza 🙁 angikwazi ukushintsha izitayela zibe "Zonke", ngiyakwazi ukuzishintsha kodwa-ke zifika kuphela lapho bezikhona (ngokulandelana) ngakho-ke angikwazi ukwenza ukuhlukana kwekhasi.
Kulungile, ngithole ividiyo engasiza futhi: http://www.youtube.com/watch?v=W40Q9YUELpc
O, kuhle kakhulu, kuzongisebenzela.
ILibreOffice inginika ikhanda uma ngizama ukubala amakhasi, ngoba ayiwabali kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni, kepha uma izwa kanjalo, ibuyisa izinombolo futhi angazi ukuthi ngikuvimbela kanjani lokhu ukuthi kungenzeki. Njengamanje, ngokwesibonelo, embhalweni engiwubhalayo ubeka kuphela o-zero kanye nalabo njengezinombolo zamakhasi ... Kungani lokhu kungenzeka? Ungangitshela ukuthi ngiyilungisa kanjani?
Ngiyabonga kusengaphambili. ukubingelela
Sawubona Susana, ngikumema ukuthi ubuze imibuzo yakho esithangamini, ukuze sikusize kangcono.
I-PS: ukungena okuvela kubha kuyahluleka kepha kungafakwa kusuka kuforamu ye-url.desdelinux.net
Sawubona, ngasizathu simbe, idokhumenti yami enamakhasi ayi-140 iyekile ukuba nezinombolo eziqhubekayo ukuqala kabusha emakhasini athile, ngakho-ke manje, ngokwesibonelo, ngemuva kwama-34 i-1 iqala futhi ezinombolweni ezansi kwekhasi. Angazi ukuthi ngibuyele kanjani ezinombolweni eziqhubekayo zendabuko. Ngiyabonga!
EDGAR BETANCOURT kusho
Uma ngiphethe idokhumenti namakhasi ami njengeheda yami nonyaweni ngamafomethi asethwe ngaphambilini futhi ngifuna ukufaka ikhasi elisha kepha ukuthi unhlokweni nonyaweni bangihlonipha ngaphandle kokulahlekelwa amasethingi, kufanele ngenzeni?
Phendula ku-EDGAR BETANCOURT
Ngibonga kakhulu! Ngibheke ezinye izifundo ngesinyathelo ngesinyathelo ngazenza, nenombolo yekhasi exutshwe nombhalo futhi ayiphumanga-. '
Siyabonga ngokuyichaza kahle! hahaha 😀
Ngempela ngiyabonga kakhulu, ngenza ithisisi yami futhi ususe ikhanda elikhulu, nginezikhathi zamahora ngizama ukufaka izinombolo ngaze ngathatha isinqumo sokuphenya ukuthi kanjani.
Iñaki Mtz. kusho
Ngizama ukubala amakhasi nge-libreoffice ukuze ibe yohlobo (ikhasi 3 lama-45) futhi ngikuthola kuphela ekhasini lokuqala. Uyazi ukuthi ngimenza kanjani ukuthi akubeke ekhasini ngalinye?
Ngiyabonga kakhulu futhi lolu uhlelo oluhle.
Phendula u-Iñaki Mtz.